Tasty APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဟင်းချက် Apps ကပ » အရသာကောင်းသော
အရသာရှိတဲ့ APK ကို
အသစ်ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းပြတွေ့ဆုံရန်! ယခုသင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာ 3000 အရသာရှိတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများကျော်; တစ် All-အသစ်သောအဆင့်-by-step ညွှန်ကြားချက် mode ကို; သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်, သင်မဆိုပါဝင်ပစ္စည်းများသဖြင့်စီစစ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆန်းသစ်ရှာရန် tool ကို, အစားအစာနှင့်သင်တို့အဘို့စိတ်ဓါတ်များရောက်နေလူမှုရေးအခါသမယအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော '' ငါ့အချက်ပြုတ်နည်း '' စာမျက်နှာတွင်!
- တိုင်းတစ်ခုတည်းစာရွက်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ခြေလှမ်း-by-step ညွှန်ကြားချက်ကိုရယူပါ။ သင်ချက်ပြုတ်နေချိန်တွင်သူကအိပ်ပျော်ကျသွားစိုးရိမ်ရန်မလိုပါဒီတော့ကျနော်တို့တောင်မှနိုးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
- သင်၏မိတ်ဆွေများကိုပြုမပြုမီအရသာရှိတဲ့အနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယိုများ Watch ။
- တစ်နေ့တာ၏အချိန်ပေါ်အခြေခံပြီးသင်၏နောက်မုန့်ညက်မှုအတွက်အကြံပြုချက်များ, ထိုရက်သတ္တပတ်၏နေ့, အဓိကအားလပ်ရက်ကိုရယူပါ။
- သတ်သတ်လွတ်? အလိုအလျှောက်အသားနှင့်အတူအားလုံးချက်ပြုတ်နည်းများဖျောက်ရန် app ကိုစိတ်ကြိုက်! (မပူပါနဲ့, သင်အမြဲနောက်ပိုင်းမှာဒီပြောင်းလဲနိုင်သည်မပြုပါနဲ့)
- လူမှုရေးအစီအစဉ်များ, ပါဝင်ပစ္စည်းများ, အစားအသောက်လိုအပ်ချက်, အခက်အခဲ, အမြန်နှုန်းအစားအစာနှင့်ပိုပြီးအားဖြင့်ရှာရန်ချက်ပြုတ်နည်းများ။
- အနည်းငယ်အမည်ကိုမှသက်သတ်လွတ်, gluten-အခမဲ့, အနိမ့် carb, ကျန်းမာ, နှင့်နှစ်သိမ့်အစားအစာကဲ့သို့သင်တို့အဖို့အရေးပါဘယ်သို့သောအားဖြင့် Filter ကို။
- အမေရိကန်ပြင်ပ Live? ကျနော်တို့တိုင်းစာရွက်အဘို့ကိုအမေရိကန်ကတိုင်းတာမှုတွေနှင့်အတူမက်ထရစ်တန်ဖိုးများကို side-by-side ရှိသည်!
သင်သည်သင်၏ app ကိုနှင့်အတူမည်သည့်ဒုက္ခရှိပါက support@buzzfeed.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုကူညီနိုင်ကျေးဇူးပြုပြီး!
နဲ့ Facebook ပေါ်မှာအရသာရှိတဲ့အထဲကစစျဆေးဖို့မမေ့မလြော့ပါ!
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒီ app ကိုသငျသညျ Nielsen ရဲ့တီဗီ Ratings အဖွဲ့ကဲ့သို့စျေးကွက်သုတေသနအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် Nielsen ရဲ့စီးပွားဖြစ်တိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် www.nielsen.com/digitalprivacy ဖတ်ရှုပါ။
12.43 ကို MB